Bhizimusi Mhepo Bhasikoro, Elliptical Muchinjikwa Mudzidzisi, Exercise Bike- Bestgym
Maekisesaizi emabhasikoro anoshandiswa pakurovedza muviri, kuwedzera kugwinya, kuonda, uye kurovedza zviitiko zvezviitiko. Iyo yekurovedza bhasikoro yakagara ichishandiswa pakurapa kwemuviri nekuda kweiyo yakaderera-maitiro, akachengeteka, uye anoshanda epamoyo kurovedza kwaanopa.
Mushini we elliptical unoshandisa chirevo chekuti kana muviri wemunhu uchifamba zvishoma nezvishoma, nekukasira, kana kumhanya, nzira yekufamba kwetsoka yakafanana neiyo ellipse. Kubudikidza neimwe nzira, chinongedzo chinofamba munzira ye elliptical, uye iyo elliptical track inoumbwa neiyo pedal inotungamira tsoka dzemushandisi.Kushandiswa kwemuchina we elliptical kunoita kuti chiitiko chemuviri cheiyo elliptical muchina uwirirane nenhanho yemunhu. Panguva yese yekusimbisa muviri, rutsoka harusiye zvachose chitiviri, icho chine simba rakakura pamabvi akabatanidzwa, uye rinokwanisa kurovedza mhasuru dzemakumbo epamusoro uye ezasi panguva imwe chete. , Inoonekwa senge budiriro mune aerobic yekushandisa michina mumakore achangopfuura.
Magineti bhasikoro bai anonyanya kushandiswa kupa vanhu chiuru chinokwana zana nemakumi manomwe nenomwe chekufambisa chisina kuvharirwa nehuremu hwemuviri dao, ine yakaderera yekukwesana coefficient ye4102, yakareruka uye yakachengeteka, uye haina simba uye kusvibiswa kwesimba. Inosanganisira gungano rebhasikoro uye yekutyaira mashini. Paunenge uchityaira, vanhu vanongoda kukwirisa kuruboshwe nekurudyi kumberi kumberi. Iyo huru yemagineti yakakosha pane iyo flywheel inofambisa iyo yechipiri magineti musimboti kutenderera kuburikidza neinobva simba Kana tsoka dzekuruboshwe nekurudyi dzichikurumidzirwa, dzinoiswa pane yechipiri magineti Vhiri rekumashure pane musimboti rinotenderera nekumhanya kwazvo. Kana chin'ai chamira, pasi pechiito chemagineti simba, bhasikoro rinokwanisa kufamba daro refu.
Simbi Furemu Chigaro Recumbent Exercise Bike BGR103
China Factory Price kugwinya recumbent agere E ...
Asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Home Kuita Workout Machine Foldin ...
Hot Kutengesa yakanakisa mutengo wekutengesa kusimba Akagara R ...
Ndapota siya kwatiri uye isu tichava nekuonana mukati maawa makumi maviri nemana.
Gumiguru 30, 2020
2018 CHINA SPORTS RATIDZA Shanghai Sports Fair
2019CHINA SPORTS RATIDZA